Storj စျေး - အွန်လိုင်း STORJ ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Storj (STORJ)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Storj (STORJ) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Storj ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $21 941 501.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Storj တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Storj များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StorjSTORJ သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.198StorjSTORJ သို့ ယူရိုEUR€0.168StorjSTORJ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.152StorjSTORJ သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.181StorjSTORJ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr1.79StorjSTORJ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.25StorjSTORJ သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč4.42StorjSTORJ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.741StorjSTORJ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.265StorjSTORJ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.277StorjSTORJ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$4.43StorjSTORJ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$1.53StorjSTORJ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.08StorjSTORJ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹14.86StorjSTORJ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.33.44StorjSTORJ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.272StorjSTORJ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.3StorjSTORJ သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿6.18StorjSTORJ သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥1.38StorjSTORJ သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥20.98StorjSTORJ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩235.48StorjSTORJ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦76.61StorjSTORJ သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽14.6StorjSTORJ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴5.49
StorjSTORJ သို့ BitcoinBTC0.00002 StorjSTORJ သို့ EthereumETH0.000503 StorjSTORJ သို့ LitecoinLTC0.00343 StorjSTORJ သို့ DigitalCashDASH0.00204 StorjSTORJ သို့ MoneroXMR0.00213 StorjSTORJ သို့ NxtNXT13.89 StorjSTORJ သို့ Ethereum ClassicETC0.0285 StorjSTORJ သို့ DogecoinDOGE56.47 StorjSTORJ သို့ ZCashZEC0.00209 StorjSTORJ သို့ BitsharesBTS7.63 StorjSTORJ သို့ DigiByteDGB6.78 StorjSTORJ သို့ RippleXRP0.674 StorjSTORJ သို့ BitcoinDarkBTCD0.00674 StorjSTORJ သို့ PeerCoinPPC0.661 StorjSTORJ သို့ CraigsCoinCRAIG89.16 StorjSTORJ သို့ BitstakeXBS8.34 StorjSTORJ သို့ PayCoinXPY3.42 StorjSTORJ သို့ ProsperCoinPRC24.55 StorjSTORJ သို့ YbCoinYBC0.000105 StorjSTORJ သို့ DarkKushDANK62.74 StorjSTORJ သို့ GiveCoinGIVE423.5 StorjSTORJ သို့ KoboCoinKOBO43.92 StorjSTORJ သို့ DarkTokenDT0.182 StorjSTORJ သို့ CETUS CoinCETI564.65
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 05:45:03 +0000.